Su'aalaha iyo jawaabaha ku saabsan Viljaskolan
Halkan waxaan ku soo uruurinay su'aalo iyo jawaabo adiga doonaya inaad waxbadan ka ogaato Viljaskolan.
Goorma ayuu Viljaskolan bilaabay?
Viljaskolan wuxuu bilaabmay 16 Agoosto 2021.
Koorsooyinkee sanadka ayaa ka jira Viljaskolan?
Waxaan ku bilownay in aan aqbalno carruurta fasallada preschool-ka iyo carruurta fasallada 1-6. Inta lagu jiro sannad dugsiyeedka soo socda, waxaan sidoo kale qaabili doonaa carruurta fasalka 7.
Waxaan balaarineynaa kooxdeena sanadka marka aan tagno waxaana aqbalidoonaa caruurta iyo dhalinyarada laga bilaabo fasalka barbaarinta ilaa sanadka 9 sano gudahood. Ilmahaagu wuxuu aadi karaa dugsiga hoose ee Viljaskolan.
Viljaskolan sidoo kale waxeey lee dahay waxqabad xanaano, Viljaförskolan, oo loogu tala galay caruurta u dhaxeysa 1 ilaa 5 sano.
Halkan ka akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan Viljaförskolan.
Viljaskolan waxay ku taal dhismeyaashii hore ee ABF ee Spadegatan 3, oo 500 mitir u jira Angereds Centrum. Dhismuhu waa la dayac tiray oo si fiican ayaa loo sameeyay ka hor bilowga dugsiga bisha Agoosto. Waxaan sidoo kale u diyaarinay deyrar dugsiyeedka ardayda dugsiga. Dareen xor u ah inaad eegto keenna film halkaas oo aad ka arki karto halka dugsigu ku yaal!
Ma jiraa diirad gaar ah Viljaskolan?
Waxaan raacnaa manhajka iswidhishka laakiin waxaan si gaar ah diiradda u saareynaa xirfadaha luqadeed ee wanaagsan, taageerada hore iyo iskaashiga u dhexeeya dugsiga iyo qoyska iyo bulshada deegaanka ee Angered. Hadafkeenu waa in dhamaan caruurta ay helaan waxbarashada ugufiican jawiga iskuulka nabdoon. Viljaskolan kuma xirna diin gaar ah, qof walba waa la soo dhaweynayaa.
Iskuul noocee ah ayaa ah Viljaskolan?
Viljaskolan waa iskuul madax banaan, waxa mararka qaar loogu yeeraa iskuul gaar loo leeyahay.
Ma waxaa jira lacag la iska xaadiriyo Viljaskolan?
Maya, wax lacag ah kuma fadhiyo inaad tagto Viljaskolan. Si kastaba ha noqotee, waa ujro inaad tagto howlaha firaaqada.
Viljaskolan ma ka jiraan waxqabadyo firaaqo?
Haa, waxaa Viljaskolan ka jira waxqabadyo firaaqo oo loogu talagalay ardayda ilaa simistarka aad buuxiso 13 sano. Waxqabadyada firaaqada waxay furan yihiin saacadaha dugsiga ka dib.
Ayaa dalban kara Viljaskolan?
Dugsiga Viljaskolan waxa uu haystaa dhawr boos oo banaan sannad dugsiyeedka 21/22, laakiin waxa lagugu soo dhawaynayaa in aad diwaangeliso xiisahaaga sannad dugsiyeedka soo socda. Kahor sanad dugsiyeedka 22/23, waxaan fileynaa inaan bilowno fasalo cusub oo cusub fasalada preschool, fasalada 4, 6 iyo 7. Haddii ay jirto xiiso weyn, fasallo badan ayaa la bilaabi karaa, markaa haka labalabeyn inaad codsato boos iyada oo aan loo eegin sanadka uu ilmahaagu bilaabayo
Waxaan balaarineynaa kooxdeena sanadka marka aan sii wadno waxaanan si tartiib tartiib ah u aqbali doonaa carruurta iyo dhalinyarada laga bilaabo fasalka lix jirka ilaa fasalka 9aad.
Sidee loo codsadaa?
Waxaad boos ku dalbanaysaa adigoo buuxinaya foom codsi ah oo aad ka heli karto halkan dhinac. Su'aalo ma ka qabtaa foomka markaas soo wac ama email noo soo dir! Markaad gudbiso arjigaaga, waxaad badiyaa heli doontaa jawaab 24 saacadood gudahood. Haddii aadan jawaab helin, iska hubi in e-maylkeennu uusan ku dhammaan spam. Haddii aadan jawaab helin, email noogu soo dir info@viljaskolan.se.
Darawalka walaalaha ah
Walaalaha waxay mudnaan ku leeyihiin Viljaskolan. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo galo halkan.
Ayaa iska leh Viljaskolan?
Viljaskolan waxaa iska leh Patrick Gladh, Patrik Nystedt iyo Ole Salsten. Milkiilayaashu waxay leeyihiin khibrad ballaaran oo ay kaga shaqeeyaan aagga dugsiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan milkiilayaasha
Raadi macluumaadka xiriirka
Haddii aadan helin jawaabta su'aashaada, si diirran baa lagugu soo dhaweynayaa nala soo xiriir.